Pol Roger idobere Brut 12L
Pol Roger Reserve Brut 12L bụ ihe ịtụnanya dị egwu maka oge ọ bụla pụrụ iche. Bụrụ ya agbamakwụkwọ onyinye, ncheta, ụbọchị ọmụmụ ma ọ bụ ememe na ezi ụlọ ọrụ.
A maara ụzọ niile nke ụlọ ọrụ anyị si egosipụta ikike nke mụta nwa kwa afọ ngwakọta nke kwekọrọ n'ụdị na ogo. Mara nke ọma ma nụchaa, cuvée Brut Réserve bụ champeenu nke oge niile.
Brut Réserve bụ ngwakọta na akụkụ hà nhata nke mkpụrụ osisi mkpụrụ vaịn atọ dị iche iche: pinot noir, pinot meunier na chardonnay site na 30 dị iche iche. A na-eji mmanya 25 echekwa iji mepụta cuvée a:
- Pinot Noir (na-eweta usoro, ahụ na ike) sitere na ụfọdụ n'ime ezigbo ntụpọ nke Montagne de Reims.
- Pinot Meunier (na-eme ka ịdị ọhụrụ, nke gbara gburugburu na nke mkpụrụ osisi) sitere na ọtụtụ mkpọtụ sitere na Vallée de la Marne na mpaghara Epernay.
- Chardonnay (na-agbakwunye mgbagwoju anya ya, mma, ịdị mma na ịdị mfe) sitere na Epernay na ụfọdụ ihe kacha mma nke Côte des Blancs.
Mgbe afọ anọ merela agadi na cellars anyị, ụdị ya na-agwakọta mgbagwoju anya, nguzozi na ọdịiche.
Ozugbo egbute ya, a na-apị mkpụrụ vaịn ahụ ozugbo. Ekwesiri ịmalite nke mbụ na nhazi ụlọ na nke abụọ na winery anyị, à froid (na 6 Celsius C) karịa oge 24. A ferụ mmanya na-egbu egbu na-ewere ọnọdụ na obere okpomọkụ (18 Celsius C) na vats na-achịkwa igwe anaghị agba nchara, nke ọ bụla na mmepụta nke obodo ọ bụla nọpụrụ iche ruo mgbe agwakọtara ya. Mmanya anyị niile na-agagharị na gbaa ụka malolactic. Mgbe akatabi okop, agwakọta na bottling, nke abụọ gbaa ụka (prize de mousse) na maturing-ewere ọnọdụ na jụụ ikuku nke anyị cellars emi odude 33 mita n'okpuru n'okporo ámá. A na-enye karama ọhụụ ọ bụla (ịwepụ aka) tupu ịmalite na usoro ọgwụgwọ, mmanya na-ezu ike maka opekata mpe ọnwa atọ tupu ahapụ ya.
Ihe ndetu na-atọ ụtọ
Pol Roger Brut Réserve na-egosipụta ahịhịa mara mma nke nwere ọla edo, yana ọtụtụ mma na egosipụta egosipụta. Site na imi dị ike ma mara mma, ọ na-ebu ụzọ nyepụta aromas nke mkpụrụ osisi (ube, mango ...) wee hapụ ihe ụtọ ọkụ nke honeysuckle na jasmine na-acha ọcha, na-egbu oge na vanilla na brioche. N'azụ okwu n'ezoghị ọnụ ma sie ike, mmanya ahụ gụnyere ezigbo nkwekọrịta na ịdị ụtọ dị ụtọ, na-echekwa ihe owuwu ụfọdụ. Na okpo ọnụ, flavors nke esie ya mkpụrụ (quince jelii, aprịkọt jam) na-eji obi ụtọ agwakọta na-esi isi nke beeswax na acacia mmanụ a honeyụ. Aromas na-adịte aka, nke nwere mkpụrụ osisi abụọ (candied orange peel, tangerine ...) na akwụkwọ nri na-ekpo ọkụ (cardamom, anis) bụ ihe pụtara ìhè.
Ọdịdị na vinosity, ịdị mma na ịdị ọcha, nke ejidere na Brut Réserve na-enye ezigbo nguzozi n'etiti ike na finesse, na-eme ka ọ bụrụ mmanya dị oke egwu iji jee ozi dị ka aperitif, ma ọ bụ soro nri dum.